Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 01/01/2021)
I-Lyon to Provence Train pricess
Lokhu Museum emangalisa iveze umlando, isiko, nempucuko ka saseMedithera ngokusebenzisa nemibukiso anthropological, ligijima art imibukiso, nefilimu. Iqoqo uhlezi ngokugqamile, isakhiwo wesimanje elaklanywa Algeria owazalelwa, EMarseilles wezakhiwo abafundile Rudy Ricciotti, futhi Roland Carta. Ixhunywe ngumuntu lezinyawo inzululwane-ukuyenga kuya ekhulwini le-13- Fort iSt John, kusukela lapho kukhona ukubukwa omangalisayo we Vieux Port nolwandle ezungeze.
Lokhu yi ebukekayo edolobheni ku emaphethelweni Verdon Gorge. Castellane, Provence kuyinto enhle umuzi omncane lomfula Verdon is indawo kokusebenza phezu Napoleon Road (Umzila Napoleon) ezungezwe amahle, izintaba zasendle. Ubuswa idwala edumile lapho Notre-Dame du Roc yesonto zezitsha, i-Provencal edolobheni elidala kuyinto Maze olunothile imizila emincane, iminonjana ebiyelweyo efana Tour Pentagonale (umbhoshongo amahlanu emaceleni) futhi Gate Clock (iwashi le-IP), kanye enhle Indawo Marcel Sauvaire sikwele - inhliziyo isinyathelo Castellane sika.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fprovence-see-get-there%2F- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)